कथाकार श्रमण र अर्याल पुरस्कृत - | Kavyalaya - काव्यालय
कथाकार श्रमण र अर्याल पुरस्कृत
by काव्यालय पुस ११, २०७६
१३६औँ लेखनाथ जयन्तीको अवसरमा चितवनका दुई जना साहित्यकार सम्मानित भएका छन् । चितवन साहित्य परिषद्ले स्थापना गरी वितरण गर्दै आएको चिसाप कृष्णकृष्णा साहित्य पुरस्कार २०७५ को लागि कथाकारहरू लक्ष्मण अर्याल र गणेश श्रमणलाई सम्युक्तरूपमा प्रदान गरिएको हो ।
अर्यालको ‘औँला’ र श्रमणको ‘गुलियो काठमाडौं’ लघुकथा सङ्ग्रहलाई नगद ११ हजार ४५ सहित सम्मान गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । यसअघि यस पुरस्कारबाट साहित्यकारहरू लकाश पौडेल, नरेन्द्रराज पौडेल, सुमन घिमिरे, डा. मतिप्रसाद ढकाल, दीपेन्द्र सिंह थापा, निर्मल ढुङ्गाना र प्रसन्न घिमिरे सम्मानित भएका थिए ।
परिषद्का सदस्य पदम प्रसाद अर्यालले संयोजन गर्नु भएको कार्यक्रम प्रा.डा. चूडामणि बन्धुको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कविहरू गोविन्दराज विनोदी, प्रेमविनोद नन्दन, वैजनाथ देवकोटा, कृष्णाकुमारी पौडेलले कविता वाचन तथा समीक्षक केदारनाथ खनालले लेखनाथ पौडेलको र चेतराज रेग्मीले पुरस्कृत स्रष्टाहरूको व्यक्तित्व बारे प्रकाश पारेका थिए ।
परिषदका अध्यक्ष सुरेन्द्र अस्तफलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कारका लागि अक्षय कोषका संस्थापक कृष्णप्रसाद पौडेलले यसअघिको कोषमा रू १ लाख एकसय एघार थप गर्ने घोषणा गर्नु भयो । यसअघि यो पुरस्कारको अक्षयकोषमा १ लाख पचास हजार रहेको र यसै कोषको ब्याज आम्दानीबाट पुरस्कार वितरण गर्दै आएको कुरा परिषद्का सचिव बालकृष्ण थपलियाले जानकारी दिनु भयो ।